दमकमा बिदेशबाट आएका छोरामा कोरोना देखिएन तर ६२ वर्षीय बाबु कसरी भए संक्रमित ? – Namaste Dainik
April 25, 2020 NamastedainikLeaveaComment on दमकमा बिदेशबाट आएका छोरामा कोरोना देखिएन तर ६२ वर्षीय बाबु कसरी भए संक्रमित ?
दमक/ झापाको दमकका एकजानमा कोराना पुष्टि भएको बताईएको छ ।
झापा दमक निवासी कोरोना संक्रमित ती व्यक्ति ६२ वर्षका रहेका छन् । उनका छोरा केही समयअगाडी दुवइबाट नेपाल आएका थिए ।
तीनजनाको आरडिटी परीक्षणमा पोजेटिभ आएपछि स्वाब परीक्षणका लागि धरान पठाईएको थियो ।
बी पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा झापाका ६२ बर्षका पुरुषलाई कोरोना भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या ४९ पुगेको छ ।
आज भेटिएका बिरामीको आइसोलेशनमा उपचार भइरहेको छ । सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
छोरालाई कोरोना पोजेटिभ नदेखिएर बाबुलाई कसरी कोरोना देखियो भन्ने प्रश्नले झापा दमकबासी चिन्तित भएका छन् । आरडिटी परिक्षणमा पोजेटिभ देखिनुको अर्थ कुनै न कुनै समय ती व्यक्ति कोरोनाको संक्रमित भएको पुष्टि हुन्छ । यदी आरडीटिमा पोजेटिभ र पिसिआरमा नेगेटिभ आयो भने ती व्यक्तिले अरु व्यक्तिलाई कोरोना सार्न सक्दैनन् भन्न बुझाइ छ ।
अब प्रश्न उठ्छ विदेशबाट आएका झापा दमककमा युवकमा आरडीटी पोजेटिभ देखियो तर पिसिआर नेगेटिभ देखियो यसको अर्थ ती व्यक्तिमा ३ हप्ता अगाडी नै कोरोना भाइरस संक्रमण भएको थियो जुन उनको बाबुमा सरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । के ती व्यक्तिले अरु व्यक्तिमा कोरोना सारेका छैनन् त ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन ती व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्ण मानिसहरुको परिक्षण गर्नुपर्दछ । नभए कोरोना दोस्रो वा तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो रहन्छ ।
आब छिटेेै रोजगारी सिर्जना गर्न १० अर्बको कार्यक्रम ल्याइने ।
किन देखिन्छ कोरोना आरडीटीमा पोजेटिभ तर पिसिआरमा नेगेटिभ ?
विदेशबाट फर्कनेलाई स्वदेशमै कामको अवसर खोजिंदै, झण्डै १० लाख फर्कने अनुमान ।
कोरोनाको डरले ज्यान जोगउन भारतबाट रातारात नेपाल पसेका नेपालीहरु फेरि तेइ ज्यान जोगउन धमाधम भारत फर्किदै, भन्छन् `मरे उतै मरौंला’